Gwara rekutsanangudza neakanakisa madhiragi iOS 13 - Chikamu II | IPhone nhau
Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 madhiri - Chikamu II
Isu tinoenderera mberi nekutakura kwedu kweyakajeka magwara saka unogona kubata iOS 13 senge yechokwadi nyanzvi kwese kwaunoenda, uyezve tora zvakanyanya kubva ku iPhone yako iyo inokodzera. Kuburitswa kweIOS 13 kwakarongerwa hafu yechipiri yaGunyana uye ino inguva yakanaka yekugadzirira zvese izvi zvitsva zviri kuuya.
Kunyangwe nhau dzingaite sedzishoma nekuda kwekushomeka patsva kwesisitimu yekushandisa, chokwadi ndechekuti iOS 13 inovanda mukati mehukuru hwenhau iwe yaunofanirwa kuziva. Kuti, Tsvaga nesu ndeapi matanho akanakisa kubata iOS 13 senge nyanzvi uye svina sekondi yega yega kubva kune yako iPhone.
Chinhu chekutanga ndechekukuyeuchidza iwe kuti iri gwara rekupedzisira rakaburitswa muzvikamu zvinoverengeka, Isu tinokusiira iwe wekutanga gwara mune IZVI CHIDZIDZO kuitira kuti iwe ugonewo kuona ndeapi madhiri atinawo panguva iyoyo uye kuti urege kupotsa zvachose. Ndine chokwadi chekuti iwe unoda kuziva imwe neimwe yadzo.
1 Maitiro ekugadzirisa iyo yekubata nguva mu3D Kubata kana Haptic Kubata
2 Maitiro ekurodha pasi mafaera kubva kuSafari
3 Maitiro ekutenderera uye kugadzirisa mavhidhiyo
4 Kusarudza pikicha uye zita reMashoko
Maitiro ekugadzirisa iyo yekubata nguva mu3D Kubata kana Haptic Kubata
Sezvatakataura mune zvimwe zvikamu zvebhuku, 3D Kubata uye Haptic Kubata zvinoita sekutongerwa kurarama mukuwirirana, Iyo Haptic Touch ndiyo imwe nzira yakanaka kune avo vasina zvishandiso zvinoshanda neiyo Hardware inoita kuti iyo 3D Kubata iite, zvisinei, chokwadi ndechekuti kana iwe waedza iyo 3D Kubata unoona kuti kunyangwe Haptic Touch ichiita basa, haina kunyatsoita uye inonzwisisika seiyo 3D Kubata. Iva zvazvingaite, Apple inoda kuti masisitimu ese agare pamwe chete, uye nekuda kweichi chikonzero chakawedzera zvigadziriso zvinoita kuti ruzivo rwedu ruve nyore.
Chekutanga mashandiro ndechekugadzirisa iyo yekubata nguva yenguva iyo inodikanwa kuti iyo Haptic Kubata mashandiro uye iwo mamamenyu epfungwa kuti amiswe, kunyangwe isu tichiwedzera kumanikidza (3D Kubata) kana kwete. Kuti tiite izvi, isu tichangoenda kuZvirongwa> Kuwanika> 3D Kubata uye haptic mhinduro> Kubata kwenguva uye isu tinokwanisa kusarudza pakati pe "pfupi" uye "refu" kuzvigadzirisa mukuda kwedu.
Maitiro ekurodha pasi mafaera kubva kuSafari
Safari ndeimwe yemashandisirwo ayo akabatsira zvakanyanya kubva mukuvandudzwa kweiyo iOS 13, Muenzaniso ndewekuti Safari kusvika zvino yanga isina maneja wekutora, ndiko kuti, isu hatina kukwanisa kurodha chero chinhu kuburikidza neSafari kunze kwekunge tashandisa iyo "Share ..." menyu nechero imwe application, asi zvirokwazvo kwete mune yekuchengetedza ndangariro yedu iPhone. Isu tinotaura munguva yakapfuura nekuti kana iOS 13 iine basa renyeredzi, zviri chaizvo izvi.
Iye zvino Safari ichatibvumidza kurodha chero mhando yezvinhu zvekunze zvakananga kunochengeterwa iPhone yedu tichishandisa faira rekutsvagisa rakabatanidzwa muIOS 13. Kuti utore chero mhando yezviri mukati tinongofanirwa kuvhura iyo Haptic Kubata kana 3D Kubata menyu mune chero chinongedzo icho isu tinoda Safari uye ine zvirimo zvekurodha pasi, ipapo nyowani yekurodha basa ichaonekwa. Kana izvo zvisati zvaoneka, isu tinongobaya pane iyi link uye mumenu yezvinyorwa tinosarudza "Sevha kumafaira".
Maitiro ekutenderera uye kugadzirisa mavhidhiyo
Iye zvino Apple yakavandudza zvikuru mupepeti, Nekudaro, muchidimbu izvo zvairi kuita kuwedzera hondo yakanaka yekushanda kune mupepeti uyo waive uripo uye watinogona kushandisa nenzira yakajeka. Izvo zvaive zvisina kujairika kugona kugona kugadzirisa mavhidhiyo zvakananga kubva kune iyo iOS gallery uye ikozvino nekuuya kweIOS 13 zvinoita. Tichakwanisa kuita zviito zvakawanda kugadzirisa mavhidhiyo, kusanganisira kutenderera vhidhiyo.
Zvinogona kutaridzika kunge zvisina-brainer, asi kutenderera vhidhiyo uye kugadzirisa zvaive zvisingaite kubva kune iyo iOS gallery. Kutenderera uye kugadzirisa vhidhiyo zvakapusa Tinofanira kuenda kuIOS Photos application, tinosarudza vhidhiyo iri mubvunzo uye kurudyi kumusoro tinowana "Hora" bhatani. Kana isu tichidzvanya, iyo menyu eanoshanda anovhura pazasi, pakati payo pane akasiyana magadziriso, mafirita, uyezve bhatani kutenderedza vhidhiyo uye kuitisa maererano nezvatinofarira uye zvatinoda, Apple haina kukwanisa kuita kuti zvive nyore isu.
Kusarudza pikicha uye zita reMashoko
Meseji ndiyo inokanganikwa nekusingaperi yeIOS, uye kwete chaizvo nekuti Apple haiise simba rakawanda mukuita kuti chikumbiro chienderere mberi, zvisinei kunze kweUnited States of America neUnited Kingdom mashandisiro ayo anenge asara, uye ndizvozvo nekuti munyika idzi. Kutumira SMS kwave kuri kwemahara kwenguva yakati, apo mune vamwe takashandisa masystem akabatana neinternet senge iyo inopihwa neWhatsApp kana FB Messenger. Iva sezvazvingaita, Meseji chishandiso chinoshanda uye chakazara chose chinokura neese iOS yekuvandudza.
Panyaya yekusvika kweIOS 13, Apple yaida kupa mameseji hunhu hushoma uye nekuita kuti hutaridzike sezvazviri, iko kwekutumira mameseji. Kuti tiite izvi izvozvi, mameseji anotibvumidza isu kumisikidza pikicha uye zita rekushandisa iro ratinogovana nevatinosangana navo. Kuti tiite izvi tinopinda mameseji, tinya bhatani (…) mukona yekumusoro kurudyi uye sarudza sarudzo «Rongedza zita nemufananidzo ...». Apa ndipo patichakwanisa kusarudza inova yedu pikicha pachedu uye yedu Meseji zita rekushandisa, sezvataizoita semuenzaniso muWhatsApp. Gare gare muchikamu cheMisetwork kana tikasarudza mameseji isu tinokwanisa kusarudza nevashandisi vatinogovana navo mufananidzo weporofita ... chii chichava chinotevera, iyo Nyaya dzeApple?
Isu tinovimba kuti chikamu chechipiri cheichi chinongedzo gwara hunyengeri hwevashandisi vehunyanzvi hweIOS 13 hwakakubatsira iwe, neizvi isu tinoda kuti iwe uzive zvakadzama mashandiro anoita iPhone yako uye nekudaro unogona kuwana zvakanyanya kubva pachigadzirwa chine hunhu uhu. Kana iwe uine chero rudzi rwekupokana, iwe unoziva mamwe manomano kana iwe unongova nechimwe chinhu chekutaura, rangarira kushandisa bhokisi rehomwe.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Gwara rekutsanangudza neakanakisa iOS 13 madhiri - Chikamu II
CARROT Mamiriro ekunze anogamuchira iPad multitasking, iCloud syncing uye zvimwe
Apple inoda kusanganisira yayo 5G modems mune mamwe madhijitari na2021